Eto’o oo sheegay xiddig gacan weyn ka geysan kara in Inter…
By jojo Last updated Jun 12, 2020
(MIlano) 12 Juun 2020. Laacibkii hore kooxaha Barcelona iyo Inter Milan ee Samuel Eto’o ayaa sheegay in ciyaaryahanka reer Chile ee Alexis Sanchez uu isbedel ku sameyn doono Nerazzurri, si ay kula tartamaan horyaalka Talyaaniga kooxaha Juventus iyo Lazio.
Sanchez ayaa kooxda Inter Milan uga yimid dhanka Manchester United qaab amaah ah, balse dhaawacyadiisa ayaa ahaa kuwa soo noqnoqday, taasoo ka dhigtay inuu maqnaado inta badan xilli ciyaareedkaan.
31 jirka reer Chile ayaa ka soo muuqday kooxda Inter 10 kulan oo kaliya , wuxuuna si toos ah ugu soo bilaawday labo kulan oo kaliya, sidaas oo ay tahay Nerazzurri ayaa ku fikireysa inuu sii joogo kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Haddaba Samuel Eto’o oo Inter Milan ka caawiyay inay ku guuleysato seddex koob taariikhi ah sanadkii 2010, ayaa sheegay in Alexis Sanchez uu ka caawin karo Inter inay ku soo laabato u dagaalamida hanashada koobka horyaalka Serie A.
Samuel Eto’o ayaa wareysi uu ku bixiyay “CDF Noticias” wuxuu ku sheegay:
“Alexis Sanchez nasiib ma laheyn xilli ciyaareedkan, sababa la xiriira dhaawaca soo gaaray, laakiin tayadiisa maahan mid laga doodi karo”.
“Waa ciyaaryahan sameyn kara isbedel waqti walba, waa weeraryahan gaar ah marka loo fiiriyo dhaqdhaqaaqyadiisa iyo weerarada fool-ka-fool ah”.
“Waa wax iska caadi ah inuu u baahan yahay waqti si uu ugu laabto xaaladihiisii ugu fiicnaa, wuxuu ku biiray Inter kaddib isagoo aan mudo badan ku ciyaarin Man United”.
“Wuxuu ku haboon yahay Nerazzurri wuxuuna leeyahay xirfado kala duwan, xiddig isagoo kale ah wuxuu si buuxda ugu raaxeysan karaa kooxda Inter Milan”.